यी हुन् संसारमै सबैभन्दा सुन्दर अनुहार भएकी महिला , विज्ञानले नै प्रमाणित गरिदियो !
काठमाडौं – संसारमा सबैभन्दा सुन्दर अनुहार कसको छ ? यो प्रश्नको उत्तर विज्ञानले दिएको छ । अमेरिकी अभिनेत्री एम्बर हर्ड विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर महिला हुन् । स्टेट अफ द आर्ट फेस म्यापिङ डाटाका अनुसार उनले सौन्दर्यको मामिलामा किम कार्दशियन र बेलायती सुपरमोडल केट मोसलाई पनि उछिनिसकेकी छिन् ।
२०७९ असार ८, बुधबार ०४:५९ 1 Minute 143 Views